ReactOS 0.4.3: iyo yakavhurwa sosi Windows yakaburitsa zviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Iko kutove neshanduro nyowani yeakakurumbira mashandiro esisitimu ReactOS. Iyi ReactOS 0.4.3, iyo inouya nezvimwe zvinhu zvitsva senge raibhurari yayo nyowani yeWinsock uye ine inopfuura 340 yakagadziriswa mumbugs, kuwedzera kune zvimwe zvipo. Iyi ndiyo yechitatu vhezheni ye0.4.x bazi rakasvika kwatiri, saka kana iwe uri mushandisi weiyi sisitimu yekushandisa kana uchida kuziva, unogona ikozvino kurodhaunura mahara kubva kune yepamutemo webhusaiti yeprojekiti.
Kune avo vasingazive, ReactOS ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi purojekiti inovavarira kugadzira yekushandisa system yaunogona gadza software yemuno yeMicrosoft Windows. Kune vanhu vanofarira kuvandudzwa kweiyi yakavhurika dombo reWindows uye nguva nenguva ivo vanotipa isu mufaro wakawanda nekuvandudza uku. Yakawanda yekuvandudza kuyedza yakaiswa mune ino yazvino vhezheni kuti isunungure kubva kune mamwe matambudziko anga ari mune dzakapfuura shanduro uye kuwedzera mashandiro.
Isu tato taura nezve iyi inonakidza chirongwa kakawanda pane ino blog. Ini ndingangoda kuwedzera zvimwe zvekuvandudza izvo zvinosanganisira, zvirinani zvakanyanya kuzivikanwa, nekuti zvakawanda. Chimwe chazvo ndiko kugadzirisa mukuenderana kwevatengi GoG (Yakanaka mitambo yekare), vhezheni nyowani yePython, iyo nyowani yekuwedzera yeWinsock raibhurari uye iwo mazana mazana eetsikidzi akagadziriswa. Zvakare kuiswa kweNTVDM, rutsigiro rwemitambo senge Comand & Kukunda uye Zera reMambo.
Kumwe kugadzirisa mu Windows Shell API, uye kumwe kugadziridzwa kwakawedzerwa kuARM3 rutsigiro. Mupfungwa iyi, iyo Memory Manager Module yakanyorwa zvekare. Chii chauri kumirira kuti uedze iyo nyowani vhezheni yeReactOS? Kune atove akawanda anowirirana maapplication nemitambo iwe yaunogona kuisa pasina dambudziko sekunge yaive yemuno Windows, chete nemukana wekuve yakavhurwa sosi, yemahara uye yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » ReactOS 0.4.3: iyo yakavhurwa sosi Windows yakaburitsa zviri pamutemo
uye kana isina kubva pane chero gnu inoshanda sisitimu, chii chakavakirwa pairi kuti "izadzise" software yemahara?
Iwe haufanire kunge uine GNU kuti uve wakasununguka. Kuti uve wakasununguka, software inofanirwa kutevedzera zvirevo zvina zvakasununguka zvinokurudzirwa neGNU.
Ini ndinofungidzira kuti ndeye mahara software nekuda kweiri rezenisi raanoshandisa. Zvakare chimwe chezvinhu zvakakosha izvo waini inoshanda navo
Antonio Vargas Serna chibatiso chenzvimbo akadaro
WELCOME: Enda kumberi uye Bvisa KWAKO!
Pindura kuna Antonio Vargas Serna
Fran lemu akadaro
Pindura Fran Lemu
Kuti ive yakavakirwa paWindows, inogona kutotaridzika zvishoma kuita seWindows 10 uye kwete Windows 98 ... handifunge kuti ndizvo zvakaoma kuchinja taskbar, riite rakati kurei uye zvidhori zvinyatsobata.
Pindura kuna Justiziero
John Quiroga akadaro
Kune "vadzidzi" iyo FSF haina hanya yemahara reactionOS, asi usanzwisise; reactOS ndeye 100% yakavhurika, ivo havana kusanganisira raibhurari yeMicrosoft. Iyo ine GNU GPL, marezinesi e LGPL, uye vashoma rezinesi reBSD, munhu anogona kuona kodhi yese, achichinja uye nekuigovana, asi sekureva kweFSF, sezvavanotsvaga "kumhanyisa" marudzi ese e windows software pane yavo system (kunyangwe yekudyidzana madhiraivha) akaraswa seBAD>: (.
Zvinotaridza kwandiri kuti pachinzvimbo chekushandisa "GUIN2WS" kana iwe ukashandisa ReactOS zviri nani ...
Pindura Juan Quiroga
Dhaireri X (@ My_Folder_95) akadaro
Juan, haugone kushandisa reagents sekunge yaive mawindows akajairwa nekuti ukangoisa tsvimbo mukati mawo, peta, inomanikidza, inobatwa, ichiri yakanyanya, yakasvibira
Pindura Folder X (@ My_Folder_95)
Microsoft inoburitsa preview yekutanga yeSQL Server yeGnu / Linux